မြန်မာ E.BOOK များ »
Posted by : ကိုထက် Thursday, March 8, 2012
java programming အကြောင်းကို ရေးထားတာပါ. သဘောတရားတွေကို အဓိကထားပြီး အခြေခံပိုင်းရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစာအုပ် ကို လေ့ လာခြင်း အားဖြင့် တစ်ခြား programming အကြောင်းများကိုပါ အလိုလို နားလည်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဘယ် programming ကိုပဲ လေ့လာလေ့လာ အခြေခံသဘောတရားချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ. သိပ်မကွာပါဘူး. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ programming အကြောင်း လေ့လာမယ် ဆိုရင်တော့ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်ကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ရှု့သင့်ပါတယ်လို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်ပါတယ်. ဒီစာအုပ်ကလေးကို ကိုယ်ချင်းစာသူ ထံမှ မေးလ်ဖြင့်ရရှိထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်. ကိုယ်ချင်းစာသူကို ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်. နောက်လဲ မြန်မာ လို ရေးထားတဲ့ နည်းပညာစာအုပ်များ အခုလိုပဲ မျှဝေပေးနိုင်ပါစေဗျာ. လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Downloaed လုပ်ယူလိုက်ပါ. မြန်မာပြည်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်များကို ပြန်ဖွင့်ပေးနေပြီလို့ သတင်း ကြားပါတယ်.ဒါဟာ တစ်ကယ့်ကို ၀မ်းသာစရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းပါ. ကျွန်တော်ကတော့ အတော်လေးကို ၀မ်းသာပါတယ် ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ အတိုင်းမသိပဲ.